नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा सोमबार बिहान भएको बम आक्रमणमा परी १४ जना नेपालीको ज्यान गयो, नौ जना घाइते !
अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा सोमबार बिहान भएको बम आक्रमणमा परी १४ जना नेपालीको ज्यान गयो, नौ जना घाइते !
अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा सोमबार बिहान भएको बम आक्रमणमा परी १४ जना नेपालीको ज्यान गएको छ । त्यस आक्रमणमा परी अरू नौ जना घाइते भएका छन् । अफगानिस्तानको गृहमन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार सोमबार बिहान उनीहरू चढेको एक मिनीबसमा एक जना आत्मघाती व्यक्तिले बम विस्फोट गराएको थियो । त्यस विस्फोटमा परी १४ जनाको घटनास्थलमै ज्यान गएको छ । मारिने १४ जना नेपाली नागरिक भएको जानकारी सो मन्त्रालयले बिहान नै गराएको हो । एक विदेशी कम्पनीमा कामगर्ने ती नागरिकलाई लिएर गएको बसलाई राजधानी काबुलमा बिहान ५.४० बजे नै आक्रमणकारीहरुले निशाना बनाएका थिए । उक्त बसलाई निशाना बनाएर एक हमलाकारीले आत्मघाती बम हानेको र त्यस आक्रमणबाट आक्रमणकारी र उक्त बसमा रहेका १४ जनाको ज्यान गएको गृहमन्त्रालयद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । घाइते भएका नौ जनामा पाँचजना नेपाली र अरू चार अफगान नागरिक रहेका बताइएको छ । काबुल नजिकैको पुल इ चर्खी सडकमा बस गुडिरहेका बेला एक जना आत्मघातीले बसलाई नै ताकेर विस्फोट गराएको बताइएको छ । मध्य काबुलमा रहेको एक विदेशी दूतावासमा सुरक्षा गार्डका रूपमा कार्यरत उनीहरू सोमबार बिहानै आफ्नो ड्युटीमा जान लागेका समयमा यो दुर्घटना भएको अनुमान गरिएको छ । आक्रमणकारी आत्मघातीले बसलाई ताकेर आफैमाथि बम
विस्फोट गराएको थियो । आक्रमणकारीको पनि घटनाहस्थलमै निधन भएको थियो ।